Naceybka iyo weerarada lagu hayo Muslimiinta oo lagu soo bandhigay telefishinka Sweden | Somaliska
Xalay waxaa telefishinka SVT laga soo daayay barnaamijka baaritaanka ee Uppdrag Granskning kaasoo lagu soo bandhigay dhibaatada lagu haayo Muslimiinta ku nool Sweden. Barnaamijka ayaa lagu soo qaatay sida ay u siyaaday dhiibaatooyinka lagu samaynayo masaajida iyo dadka Muslimiinta ah, iyo guud ahaan colaada ka dhanka ah.
Qeybta ugu xiisaha badan ee barnaamijka ayaa ahayd markii lagu soo qaatay dhibaatada ay dadka Kiristaanka ah ee loo yaqaan Assyrier ee ku nool magaalada Södertälje ay ku hayaan Muslimiinta ku nool magaaladaasi. Telefishinka ayaa soo bandhigay sida dhalinyarada Kiristaanka ah ay u dhibaateeyaan gabdhaha xijaaban iyo sida ay u weeraraan masaajida Muslimiinta, iyagoo qaasatan dhibaato ku haaya gabdhaha Soomaalida ee halkaasi ku nool.
Siyaasiyiinta magaalada Södertälje ayaan cabsi darteed uga hadlin arintaan, iyagoo ka cabsanaya in aysan helin cid doorata maadaama dadka ku nool Södertälje ay sadex meelmood hal meel yihiin kiristaanka Assyrier ah.
Barnaamijka ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay weerarada lagu haayo masaajida, iyadoo lagu soo qaatay sida masaajida qaarkood loo dhigay madax doofaar iyo dhalooyinka qamriga. Waxaa kale oo barnaamijka lagu soo bandhigay weerarada lagu haayo gabdhaha xijaaban oo si qaas ah loo ugaarsado.
Xaalada Muslimiinta ku nool Sweden ayaa guud ahaan u muuqato mid murugo leh, iyadoo ay maalin kata sii badanayaan weerarada iyo aflagaadada ka dhanka ah Muslimiinta. Weerarada lagu haayo Muslimiinta ayaa lagu eedeeyay in qeyb weyn ay ka yihiin xisbiga cunsuriga ah ee Sverigedemokraterna (SD).
Halkaan ka daawo barnaaijka.
January 29, 2015 at 13:28
waa halka barnamiij ee an ugu jeclahay sidaa uu xaqiqda uga hadlo
somali laba maar ayey dhibi haysata madow iyo muslim